Nice "n'azụ Mpaghara" Mgbasa ozi na kuki ogologo anụ | Esi m mac
Ọkwa dị mma n'azụ ihe nkiri na nnukwu anụ kuki
Apple nwere ọwa YouTube ya n'oge na-adịbeghị anya n'okwu banyere vidiyo ndị edepụtara. Ọ bụ eziokwu na anyị nwere ike ịsị na onye ọ bụla n’ime ha bụ mgbasa ozi, mana agbanyeghị ịbụ mgbasa ozi m chere ụfọdụ n'ime obere vidiyo ndị a amaka.
Vidio ohuru a weputara awa ole na ole gara aga na Cupertino, na-egosi anyị nnukwu anụ kuki na ndekọ nke mgbasa ozi ha bidoro iji kwalite onye enyemaka Siri obere ntakịrị, naanị mgbe asịrị banyere mbata ya na OS X bụ palpable. Ugbu a ụlọ ọrụ tọhapụrụ vidiyo ọzọ a na n'azụ ese foto na usoro ndekọ.
N'ụzọ ezi uche dị na ya, enwere ike ịtụle mgbasa ozi ọzọ banyere Siri na iPhone na-enwekarị kuki nke kuki enyi ma ọ bụrụ na na vidiyo gara aga anyị nwere ọchị ịhụ ya, n'ọnọdụ a ga-eme ka anyị mụmụọ ọnụ ọchị ọzọ.
Apple dị oke egwu banyere ịmalite mgbasa ozi na YouTube ma anyị chere na ọ bụ ezigbo echiche iji ruo ndị ọrụ ndị ọzọ. Fọdụ mgbasa ozi na-atọ ọchị na ụfọdụ mmetụta uche, dị ka ọ dị n’ihe banyere vidio abụọ ahụ ewepụtara n’abalị abụọ nke Eprel. Ndị a raara onwe ha nye iji bulie mmata ndị mmadụ banyere ọrịa mgbagwoju anya dị ka Autism na iji gosipụta uru ndị teknụzụ na-enye n'ọnọdụ ndị a, n'ihi na Apple a na-egosi anyị vidiyo abụọ gbasara nwatakịrị na-arịa autism na na ị nwere ike ịhụ na ọwa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ọkwa dị mma n'azụ ihe nkiri na nnukwu anụ kuki
Inye Giphy maka ndị hụrụ GIF n'anya na-enweta mmelite ọhụrụ
Jiri Fireworks HD tinye ihe ọkụ ọkụ na ihuenyo gị